ट्रम्पको टाउँको दुखाई बन्दै नश्लविरोधी प्रदर्शन – Dcnepal
Sun, 26 Sep, 2021 | २०७८ असोज १० गते
एमाले प्रकाशको ताप हो, एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्छ: गोकर्ण विष्ट
अमेरिकामा दौडिरहेको ट्रेन पटरी छाडेर उछिट्टियो
अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तान एकसाथ मिलेर के गर्दैछन् ?
पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले छाडे माधव नेपालको साथ, एमालेमै रहने निर्णय
ट्रम्पको टाउँको दुखाई बन्दै नश्लविरोधी प्रदर्शन
प्रकाशित : २०७७ साउन १४ गते २१:२७
वाशिङ्टन (बीबीसी)। यतिबेला अमेरिकामा जातिवाद विरोधी आन्दोलनको गति बढेको छ भने राष्ट्रपति पदको चुनाव आउन तीन महिना मात्र बाँकी छ। राष्ट्रपति पदको चुनाव संयुक्त राज्यमा नोभेम्बर,, २०२० मा हुने छ।
तर त्यहाँ फेरि एकपल्ट आन्दोलन तीव्र भएको छ। प्रदर्शनको क्रममा अमेरिकाको सियाटल शहरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच पुलिस झडप भएको छ। पोर्टलैंडमा भइरहेको प्रदर्शनको समर्थनमा यो रैली आयोजित गरिएको थियो। हालसम्म यी प्रदर्शनमा ४५जना पक्राउ परेका छन् र यस अवधिमा २१ प्रहरीहरू घाइते भएका छन्। टेक्सासको अस्टिनमा ब्ल्याक लाइभ मेटर प्रोटेस्टको बेला एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।
स्थानीय अखबार अस्टिन स्टेट्सम्यानले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ ‘जब प्रदर्शनकारीहरू सडकमा भेला भए, कसैले प्रदर्शनकारीहरूलाई भगाउन खोज्यो। यस पछि कारमा बसिरहेको व्यक्तिले प्रदर्शनकारीहरूको समूहमा गोली हान्न शुरू गरे। यस समयमा एक जनाको मृत्यु भयो।’
मृतककी आमाले पछि उनलाई ग्यारेट फोस्टरको रूपमा पहिचान गरिन्। उनले न्यूज च्यानल एबीसीलाई गारेटले शूटिंगको क्रममा उनको मंगेतरको व्हीलचेयर तान्दै गरेको बेला गोली हानिएको बताइन्। उनले पछिल्ला दिनहरुमा गैर–जातिले जातिविरोधी विरोधी आन्दोलनमा भाग लिइरहेको बताइन्।
लगभग दुई महिना अघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको पुलिस हिरासतमा काला जातिका मानिस जर्ज फ्लोडको मृत्यु भएदेखि अमेरिकालगायत विश्वका धेरै ठाउँमा जातीयता विरोधी आन्दोलनहरू भइरहेको छ। यस आन्दोलनको नारा ब्ल्याक लाइभ मैटर हो।
यसले फेरि एकपल्ट विश्वभर जातिय भेदभावको बारेमा छलफल सुरु गर्यो। ईतिहासका नायकहरू पुनः मूल्यांकन भइरहेका छन्। अमेरिकालगायत धेरै ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरूले दासत्वका साथै सम्बन्धित व्यक्तिको मूर्तिहरू भत्काएका छन्। धेरै ठूला कम्पनीहरूले पनि यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्।
अमेरिकाका सबै प्रान्तहरूमा विरोध प्रदर्शन हुँदैछ। इलिनोइसको सानो गाउँ अन्नामा पनि बिरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। यो स्थानीय रूपमा सबै भन्दा जातीय ठाउँ मानिन्छ। वाशिंगटन डीसीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निवास, ह्वाइट हाउसमा जाने सडकलाई ब्ल्याक लाइभ्स मैटर प्लाजा नाम दिइएको छ। अमेरिकामा अपराध र न्याय सम्बन्धी तथ्य हेरेपछि यो पत्ता लाग्यो कि पुलिस गोलीबारी भएको खण्डमा अफ्रिकी–अमेरिकीहरूको संख्या अमेरिकामा उनीहरूको कुल जनसंख्याको अनुपातमा बढी छ।
थप रूपमा, अफ्रिकी–अमेरिकीहरू पक्राउको दर गोरा भन्दा धेरै बढी छ, जबकि सर्वेक्षणले खुलासा गरेको छ कि दुबै समुदायले समान तहको लागूपदार्थको प्रयोग गर्छन्।
भर्खरै जारी तथ्यांकअनुसार अफ्रिकी–अमेरिकीहरू गोरा भन्दा पाँच गुणा बढी जेल हावा खाउँदछन् जबकि हिस्पैनिक–अमेरिकीहरूभन्दा दुई गुणा बढी।
२०१८ मा, अफ्रिकी–अमेरिकीहरू अमेरिकी जनसंख्याको १२ प्रतिशत मात्र थिए, तर उनीहरू यस देशमा जेलमा रहेका संख्याको एक तिहाइको हिस्सा हुन्। जर्ज फ्लोयडको मृत्यु बाहेक, धेरै अश्वेत मानिसहरुको मृत्युको कारण अमेरिकामा हिंसा भडकिएको छ। सिएटल र अस्टिन बाहेक प्रदर्शनकारीहरू केन्टुकी, अरोरा, कोलोराडो, न्यू योर्क, ओमाहा, नेब्रास्का, लस एन्जलस, अकल्याण्ड, क्यालिफोर्निया र भर्जिनियामा रिचमोडमा जुलुस प्रदर्शन भएका छन्।
हिंसात्मक झडपका कारण पोर्टलैंडमा आन्दोलनले नयाँ जोश प्राप्त गरेको छ, जबकि पुलिसले यस महिनाको शुरूमा समर्थन गरेपछि प्रदर्शनहरू रोकिएका थिए।
पोर्टलैंडमा स्थानीय विपक्ष र अन्य राज्य नेताहरूको विरोधको बाबजुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरे। उनले भने कि परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारी भवनहरुलाई क्षतिबाट बचाउन यो निर्णय लिइएको छ।
यस संघीय शक्तिले प्रदर्शनकारीहरुसंग हिंसात्मक झडप गरेको छ, जसको कारण वर्तमान तनाव बढेको छ र यसको समर्थनमा कहीं जुलुस प्रदर्शनहरु पनि भइरहेका छन्।
गत वर्ष कोलोराडोमा २२ वर्षीया युवती, एलिजा म्याक्लिनको पनि पुलिस हिरासतमा मृत्यु भयो। आन्दोलनको क्रममा त्यो मुद्दा पनि अगाडि ल्याइदैछ। केन्टकीका काला जातीकी महिला ब्रेनोना टेलरको न्यायको लागि मांग गर्दै छन्। मार्चमा, उनलाई पुलिसले घरमा गोली हानेको थियो। यहाँका प्रदर्शनकारीहरूले जेम्स स्कारलॉक नामका २२ वर्षीय काला जातीका मानिसको हत्याबारे पनि न्यायको माग गरिरहेका छन्। जेम्सलाई मेको महिनामा सेतो बारको मालिकले गोली हानेका थिए।
अमेरिकामा एकतर्फी चुनाव हुँदैछ भने, अर्कोतर्फ, मे महिनामा शुरू भएको विरोध प्रदर्शन अझै चलिरहेको छ। यस सम्पूर्ण घटनाको लागि ट्रम्प प्रशासनको निकै आलोचना पनि भइरहेको छ र त्यहाँ उनीहरूलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिने कुरा छ। तर केही व्यक्तिहरू ट्रम्पको चुनावी रणनीति पनि त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न भएको विश्वास गर्दछन्। चुनावलाई हेरेर डेमोक्रेटिक पार्टी सरकारमा रहेका राज्यहरूमा उनीहरू कानून र सुव्यवस्था सम्बन्धी मुद्दा देखाउन चाहन्छन्।
अमेरिकी जनसंख्या को १२ प्रतिशत काला जातीका मानिस छन। बराक ओबामा ट्रम्पभन्दा ठीक पहिले संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति बन्ने पहिलो अफ्रिकी–अमेरिकी थिए।
साहित्य र सिर्जनामा विश्व रेकर्ड बनाउन मै बित्छ डा. डिआर उपाध्याय
चितवनको भरतपुर महानगरले ठिमुरामा फोहोर फाल्ने निर्णय गरे संगै स्थानीय आक्रोसित
सभामुखका व्यवहारले पनि व्यवस्थामाथि अविश्वास बढ्न सक्छ : सभामुख शाही
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा इरानका राष्ट्रपतिको प्रहार र चीनको महत्वपूर्ण घोषणा
कांग्रेसका तीन गुटमा सीमित नौ सभापतिका उम्मेदवार : को कता मिसिँदै?
उपेन्द्र महतो र एनआरएनएलाई सगुनको धन्यवाद (भिडियोसहित)